Mbola misy vokany ve ny fikarohana momba ny fikarohana biolojika?
Raha niara-niasa tamin'ny Google Analytics ianao, dia mety fantatrao fa misy loharano efatra lehibe indrindra ahitanao azy - organika (fikarohana), famindrana, sosialy ary karama. Mety hahazo fifamoivoizana amin'ny tambajotra sosialy ianao ary mandoa dokam-barotra, fa ny lanjanao dia tsy ho ambony noho ny maha-zava-dehibe ny habetsan'ny tranonkala, ary ny SEO-friendliness dia dingana goavana amin'ny fifamoivoizana organika.
Amin'izao andro iainantsika izao dia miaina ao anatin'ny tontolo miova sy samihafa isika izay ahitan'ny olona vahaolana hafa amin'ny fikarakarana fikarohana biolojika.Mampiasa dokam-barotra isa-per-click izahay, mamorona ny mombamomba ny sehatra sosialy ary mampiroborobo ny vokatra sy ny serivisy amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy - best computer store in san jose. Ny tranokalan'ny tranokala dia tsy miaina intsony ary maty noho ny fametrahana ny tranokalany ao amin'ny Google, manadino ny dikan'ny lisitra organika ho an'ny toerana misy azy ireo. Na izany aza, ny toekarena organika dia mbola mitana ny anjara toerana manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny fananganana. Araka ny antontan'isa momba ny statistika, ny fikarohana biolojika hafa dia miteraka karazana hafa mpitondra fiara mifamoivoy, mitondra eo amin'ny 51% eo amin'ny mpanjifa rehetra mety ho an'ny orinasa B2B sy B2C.
Mbola mila fividianana fikarohana momba ny organika ve ianao?
Ny fitantanana ny fikarakarana fikarohana biolojika no hany safidy hanintonana fifamoivoizana momba ny fitadiavana kalitao. Ny organika no tsara indrindra amin'ny fampitana fifamoivoizana. Ny fandefasana tokana izay afaka mitondra anao dia mitovy ny vokatra tsara dia ny fikarohana fikarohana. Na dia izany aza, ny fikarohana karama dia tsy natao afa-tsy 10% amin'ny fifamoivoizana tanteraka. Ny ankamaroan'ny SEO gurus dia manome toro-hevitra amin'ny fampiasam-bola amin'ny fikarakarana fikaroana organika sy karama mba hahazoana ny fiverenana lehibe kokoa amin'ny fampiasam-bola. Ohatra, amin'ny teknolojia sy ny indostrian'ny indostria, ny fomba fanao toy itony dia mihoatra ny roa ampahatelon'ny vola miditra.
Misy fironana iray manintona ny fampitaovana amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sosialy. Afaka mahazo 40 ka hatramin'ny 60 isan-jaton'ny fifamoivoizana avy ao amin'ny Facebook sy Instagram ianao, saingy tsy mitandrina ny fanatsarana ny tranonkala. Ity toe-javatra ity dia azo hazavaina amin'ny famantarana kely an'ity karazana fifamoivoizana ity hitadiavana motera. Ny fifamoivoizana ara-tsosialy dia mety ho loharanom-pifandraisana hafa fa tsy ilay mpitarika. Ankoatra izany, rehefa mampihatra ireo fantsom-pampitam-baovaon'ny tambajotra sosialy ianao mba hahazoana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala, ianao dia mamindra fo amin'ireo sehatra sosialy. Midika izany fa mila mandoa isaky ny tranonkala media sosialy ianao hanapa-kevitra ny hanova ny fitsipika momba ny kaonty momba ny kaonty. Azonao atao ny milaza fa ny toe-javatra mitovy dia mety hitranga amin'ny fikarakarana fikarohana Google momba ny fikarohana. Azoko lazaina fa miankina izany. Mazava ho azy, ny lozam-pifidianana koa dia mety hianjera noho ny fanovana algorithm. Na izany aza, amin'ny tranga fanao amin'ny fikarohana biolojika, mety tsy hitranga aminao izany, ary na dia izany aza, dia hahazo ny toeranao ao anatin'ny fotoana fohy.
Mitandrema fa manana adiresy manan-danja sy mazava ianao. Alefaso ny URL -nao, anisan'izany ny iray amin'ny teny ifandaharana indrindra amin'ny fifamoivoizana.
Mila mandanjalanja ny teny fanalahidy ianao mandritra ny votoatin'ny tranonkala. Aza mampiasa teny fanalahidy loatra amin'ny pejy iray. Ny salan-draketran-dresaka dia fikarohana telo isaky ny pejy iray. Ataovy azo antoka fa misy teny fanalahidy manan-danja ao amin'ny lohateny, sombin-tany ary akaikin'ny tampon'ny paragrafy.
Mampiasà antso amin'ny teknikam-pomba hanatsarana ireo mpampiasa maro hafa tsy hitady. Ataovy azo antoka fa manontany ny mpitsidika anao ny vohikala hanao asa sasany. Ohatra, "Mividiana izao," "Mandidy amin'ny tsindry iray" na "Mandray anjara maimaim-poana androany. "Ny CTA dia fomba nentim-paharazana izay mametraka ny mpanjifanao iray tsindry tsikelikely ao amin'ny tranokalanao.